Shacab badan oo ka qaxaya magaalada Mandheera - jornalizem
Shacab badan oo ka qaxaya magaalada Mandheera
"Sidii aan u joognay ciidan duulaya ayaa ina soo galay, laba ciidan dhexdood ayaa galnay, halkanna waxa xuduud, caruurtii iskuullada aadayay khatar ayay ku jiraan, nafsadeenna khatar ayay ku jirtaa, waan qaxeynaa sababtoo haddii u madfac kugu soo dhaco halkee la aadi," ayay tiri haweeney kamid ah dadkii maanta ka qaxay Mandheera.
"Magaalada amnigeeda wuu xumaaday, dad badan oo reer Kenya ayaa ku dhaawacmay dagaalkii dhawaan dhacay, in dagaal uu dhaco oo khasaaro uu inaga soo gaaro ayaan ka carareynaa, Raamu ayaan doonayaa in aan caruurta geysto, waxbadanna ayaa ka cabanay ciidmaada nala dul keenay, dowladdeenana waxba kama qabaneyso," ayuu yiri Rashiid Isaaq.
Madaxweyne kuxigeenka koowaad ee Jubaland, Maxamuud Sayid oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in isaga iyo ciidamada maamulkiisa ay ku sugan yihiin xadka u dhaxeeya labada dal.
Hase yeeshee mas'uuliyiinta deegaanka Mandheera ayaa sheegay in ciidamo taabacsan wasiirka amniga e Jubaland, Cadirashiid Janan ay ku sugan yihiin gudaha Mandheera, arrintaas oo ay sheegen inay khatar ku tahay amniga shacabka Mandheera.
Barasaabka Mandheera, Cali Ibraahim Rooba, ayaa bartiisa Twiter-ka ku qoray in ciidanka Jubaland ay ku sugan yihiin gudaha magaalada.
"Ciidamada Jubaland waxaa ay dhex socdaan gudaha Mandheera, gaar ahaan xaafadda Bulla Jamhuri, arrintanna waxay khatar ku tahay amniga shacabka Kenyanka ee ku nool Mandheera, Dowladda Kenyanna waa inay wax ka qabato arrintan ama waxaa ka dhalan doonaa khasaaro nafeed," ayuu bartiis Twiter-ka ku qoray.
Xildhibaanka laga soo doorto Bariga Mandheera, Cumar Maxamed Macallin, ayaa BBC-da u sheegay in ay dadka deegaankiisa ay cabsi soo foodsaartay, kaddib markii qeyb ka mid ah magaalada ay fariisimo ka dhigteen ciidammada wasiirka amniga ee Jubaland, Cabdirashiid Xasan Cabdinuur (Janan).
Xildhibaan Cumar ayaa dowladda Kenya ku eedeeyay inay fariisin siisay ciidammada Cabdirashiid Janan, arrintaas oo uu sheegay in ay halis gelinayso amniga deegaanka isaga laga soo doortay ee Bariga Mandheera.
Sidoo kale madaxtooyada Kenya ayaa maalmo kahor soo saarta bayaan ay uga hadleyso xadgudub ay sheegtay inay Soomaaliya u geysatay dhulka Kenya iyo madaxbannaanideedaba, inkastoo markii dambe labada madaxweyne ay khadka taleefonka ku wada hadleen, ayna isla garteen in la dejiyo xiisadda ka taagan xuduudka.